Abayili bemizobo baseSpain abanembali | Abadali be-Intanethi
Abayili bemizobo baseSpain abanembali
Iris Gamen | | Abadlali
Abaqulunqi begraphic badlala indima ebalulekileyo ekugqithiseni nasekuthengiseni iingcamango. Kuyilo kufuneka ube nalo ingqeqesho, ubuchule bokuyila kwaye uhlale unolwazi ngeendlela ezintsha kwaye uzivuselele. Umsebenzi ophambili womzobi wegraphic yiyo yonke into equkwa ngumyalezo obonakalayo, kufuneka bayazi indlela yokudlulisa ingcamango ngendlela yokuyila.
Kuphela ngabayili bemizobo abagqwesileyo abenza imisebenzi yabo yahluke kweyamanye amagcisa. Baziingcali ezinesitayile somntu, ezizodwa kwaye kulula ukuzibona, ziyisethi yamaxabiso amathathu; uqeqesho, ubuchule kunye nokuzingisa. Kule post, siza kuthetha ngeyona nto ingcono abayili begraphic eSpain ezidibanisa le miba mithathu, phakathi kwezinye.
Umyili akadingeki ukuba asebenze kwisitudiyo kwaye imisebenzi yakhe ibonakala kwipotfoliyo, hayi. Umyili wegraphic unokubakho kumacandelo ahlukeneyo afana nomabonakude, icinema, iimagazini, imidiya yedijithali, njl. Kukho iindawo ezininzi zonxibelelwano apho umyili anokusebenza khona. Eyona nto ibalulekileyo kukuba umyili uyasiqonda isimbo sakhe, abaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye nomyalezo ekufuneka awugqithise ngomsebenzi wakhe.
1 Ngaba uyilo lomzobo lubalulekile?
2 Abayili bemizobo abagqwesileyo baseSpain
2.3 UCroz Novillo
2.5 UJavier Mariscal
2.7 UMarta Cerda
Ngaba uyilo lomzobo lubalulekile?
Uyilo lweGraphic lube sisixhobo sonxibelelwano ekudluliseleni ngaso umyalezo wemveliso ethile, inkonzo okanye uphawu. Uyilo lukhona kumacandelo ahlukeneyo ngaphakathi kwebhrendi, ukusuka kwisazisi senkampani, uyilo lwelogo, uyilo lwentengiso, iincwadana okanye iikhathalogu zenkampani, amaphulo okwazisa, ukupakishwa, phakathi kwabanye.
Umyili wegraphic kufuneka abe kuhlaziyo oluqhubekayo, kuba iintsingiselo ziyavela ngokuhamba kwexesha, ukongeza kwindaleko eqhubekayo yokuyila. Umyili kufuneka abone izinto apho abanye abayili bangaziboni, kufuneka usebenzise italente yakho kwaye uphume kwindlela yesiqhelo. E-Spain, sinesitayile segraphic esahlukileyo kunamanye amazwe kwaye yiyo loo nto umyili kufuneka asoloko eyazi into eyenzekayo.
Umzobo womzobo wegraphic ubaluleke kakhulu kwiimpawu, kuba zijongene nokusebenza ngomfanekiso wabo, lo msebenzi kufuneka uhlale kwaye uzinikele. Umyili kufuneka eze kuhlala kwaye ashiye uphawu naphi na apho aya khona.
Abayili bemizobo abagqwesileyo baseSpain
Ayinguye wonke umntu oyaziyo ngokubaluleka koyilo lwegraphicAbayiqondi indima yomyili. Abaqondi ukuba xa bebona uphawu, incwadana enemifanekiso kwivenkile enkulu, ipowusta okanye iphepha lewebhu, konke oku kudlule ezandleni zomyili, ngumsebenzi othatha ixesha elininzi kunye nokuzinikela.
Abayili bemizobo abagqwesileyo baseSpain esiza kuthetha ngayo, ebesiphethe okanye siqhubeke siphethe ukuphucula imbonakalo yeempawu ezaziwayo-kakuhle kunye neenkampani kwilizwe lethu nakwamanye amazwe. Ngamagama ekufuneka wonke umntu, zombini iingcali zobugcisa kunye nabangaphandle, bawazi. Ukubona kunye nokuhlalutya imisebenzi yakhe ngumsebenzi wokufumana impembelelo yakhe, isimbo kunye nenkuthazo.
Umzobi kunye nomzobi, owazalelwa eMadrid ngo-1963. Ngaphambi kokungena kwihlabathi lobugcisa begraphic, wasebenza njengomdlali weqonga kwiinkampani ezahlukeneyo zethiyetha. Ngo-1988, waqalisa ukusebenza kwiphephandaba laseAragon, iHeraldo de Aragón. Waqeqeshelwa ukuba ngumyili wemizobo uPeret, nto leyo eyayibalulekile kumsebenzi wakhe wehlabathi loyilo.Ekupheleni kwaloo minyaka, wazivulela esakhe studio, iCamaleón, eZaragoza.
Kuyo yonke imisebenzi yakhe yobungcali, U-Isidro Ferrer, ufumene iimbasa ezininzi ngoyilo lwakhe, umzekelo, i-Biennale Of Young Mediterranean Artist Graphic Image Award ngo-1995 eCroatia, i-National Design Award kwi-2002, phakathi kwamanye amabhaso.
UIsidro Ferrer, kwimisebenzi yakhe, igcina isitayile esikhethekileyo nesibukekayo, idlala kuninzi lwazo nge-surrealism kunye nomanyano lweemotifs ezothusayo, ngexesha lokufotwa dlulisela umyalezo ngendlela enamandla.
Wazalelwa eMadrid ngo-1951, ungumyili onesitayile somntu siqu, esiye samkhokelela kwiimpawu ezibaluleke kakhulu ezifana neLoewe, Absolut Vodka, Benneton, Camper, njl. ndifuna ukusebenza naye. Kodwa Akasebenzanga kuphela ngeempawu kodwa nabalawuli abadumileyo kunye neemvumi ezifana Andrés Calamaro, Pedro Almodóvar, Alex de la Iglesia, Bruce Springsteen, phakathi kwabanye.
Umyili, umzobi, umzobi kunye nomchwethezi oyingcaphephe, ungumnxibelelanisi ongazi mida. Kwimisebenzi yakhe, u-Óscar Mariné, isombulula iingxaki ngezisombululo zoyilo ngokusebenzisa ulwazi lokuchwetheza, umfanekiso ohlaziyiweyo kunye nomfanekiso wawo. Imisebenzi yakhe idibanisa i-solvency kunye nobuchule.
Imisebenzi yakhe iyaziwa yaphula imida yoyilo lwegraphic, wenze indibaniselwano yeendlela zokuziqhelanisa neengcinga zakho.
UJosé María Cruz Novillo, ngaphandle kwamathandabuzo enye yeembekiselo ezingenakuphikiswa kwihlabathi loyilo lwegraphic kwinqanaba lesizwe nelamazwe ngamazwe. Wazalelwa eCuenca ngo-1936. Waziyeka izifundo zakhe zomthetho ukuze aqalise ukusebenza njengomzobi kwi-Advertising Clarín eMadrid. Amanye amava awathi atshintsha umbono wakhe nobomi bakhe yayikukusebenzisana njengomyili wemizi-mveliso we-SEDI, nokuba yinxalenye yeqela lamagcisa ePavilion yaseSpain kwiNew York Fair.
Ngo-1969, uvula esakhe studio apho izazisi zenkampani ezaziwayo ezifana neCorreos, iBanco Pastor, Urbis, Tesoro Público, Comunidad de Madrid, PSOE, COPE, El Mundo, El economista, Antena 3, Endesa, kunye nezinye ezininzi. Ukongeza kwiipowusta zemiboniso bhanyabhanya kwi-cinema yaseSpain.
Isitayile somsebenzi kaCruz Novillo luphawu lokusetyenziswa kwe iimilo zejometri, uyilo olulula, kunye nolwakhiwo oluqhelekileyo olulinganayo. Isebenzisa imivumbo elula kunye nengqindilili.
Wazalelwa eMadrid ngo-1975. ngomnye wabayili abadumileyo kuyilo lwemizobo yeSpanish. UClara Montagut uzichaza njengomyili wemizobo, umlawuli wezobugcisa kunye nomzobi.
Kangangeminyaka emine, ebengumalathisi wezobugcisa wenye yezona magazini zibalulekileyo zamadoda, iphephancwadi iEsquire. Ukongeza, ngaphambili wayesebenzela iimagazini zePrisa kunye neRolling Stone iminyaka esi-7.
Uye wawongwa ngokuthanda kwakhe uyilo, ngembasa yeGraffica kunye ne-NH evela kuMbutho woYilo olutsha.
Ngubani ongayazi i-mascot ye-Olimpiki yase-Barcelona ye-1992, i-Cobi, eyilwe nguJavier Mariscal. umyili ngubani lungisa kwaye uphuhlise isitayile sakho, kuzo zonke iintlobo zemigangatho kunye noqeqesho. Waqala uqeqesho lwakhe kwisikolo sase-Elisava e-Barcelona, ​​​​kodwa akazange achithe xesha waqala ukulandela indlela yakhe, elandela iimpembelelo zakhe zokudala.
Ngombulelo kuyilo lwakhe njengomyili wangaphakathi kunye nezinto, waqala ukuqatshelwa kwinqanaba lesizwe kunye nehlabathi. Umyili owaphumelela imbasa ngo-1999, ngembasa yoYilo yeSizwe kunye nowama-2011, ngeMbasa yeGoya yefilimu egqwesileyo yoopopayi.
Umlandeli womzobo ukususela ebuntwaneni, uManuel waqala ukufunda i-architecture, kodwa ngokukhawuleza wazishiya ezo zifundo ukuze azinikele kwihlabathi loyilo.
Su Umsebenzi wakhe kwihlabathi lobugcisa begraphic uqala ngeSidecar graphic collective, apho wayesebenzela iiarhente ezinje ngoOgilvy, McCann kunye neJWT.
UManuel Estrada uvula esakhe isitudiyo apho azinikezela khona kuyilo lweelogo, iiqweqwe zeencwadi, iipowusta, njl., kwaye kukule nto. ishumi leminyaka yee-90s, apho umsebenzi wakhe ufikelela kwincopho yawo kwaye ube sisalathiso sesizwe.
Umculi waseCatalan, owamthabatha waya eUnited States naseNetherlands. UMarta Cerda ngu igcisa elihamba phakathi kwecalligraphy kunye nomfanekiso. Ukuzinikela kwakhe kwi-typography kuvela kwiiklasi ze-calligraphy awazenzayo ngexesha lokufunda kwakhe.
Ngombulelo kwiimpembelelo azifumeneyo ngamava akhe obugcisa, kunye nothando awayesele enalo kwi-calligraphy, uMarta waqala ukuthatha inxaxheba kwaye aziphuhlise kwiprojekthi nganye awayenayo ngesandla, isimbo esingenakuphikiswa, kunye nokuthanda ukuchwetheza kunye nomfanekiso obonakaliswa kumsebenzi ngamnye wakhe. UMarta Cerdá usebenze kunye neempawu ezaziwayo ezifana noRay Ban, iNike, iCoca Cola, i-Guardian, iPanasonic, kunye nezinye ezininzi.
Uluhlu lwabayili bemizobo baseSpain luya kuqhubeka nokubandakanya amanye amagama amaninzi, kule posi sidwelise ezona zi-7 ziphambili, kodwa ngokuqinisekileyo siyasilela amanye amaninzi.
Khumbula ukuba into yokuqala ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuze ube ngumyili wegraphic kukuba kufuneka ube nayo ukukwazi ukucwangciswa, iinkcukacha kwaye ngaphezu kwayo yonke into ayinamida ngokuyila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Abayili bemizobo baseSpain abanembali
indlela yokwenza ibhodi yamabali
Indlela yokwenza isilogeni